Sida loogu daro "hawl maalmeedka oo dhan" ee kalandarka macOS Sierra | Waxaan ka socdaa mac
Waxaa jira warar dhowr ah oo aan ka helayno nidaamka cusub ee macOS Sierra 1o.12 oo si rasmi ah u bilaabay Apple saacado ka hor. Waxyaabaha cusub ee ugu waawayn ee aan ka dhex aragno OS-ga cusub waxaan sidoo kale haynaa faahfaahino yar yar ama hagaajin ku saabsan codsiyada hooyo ee la hirgaliyay muddo dheer laakiin marka la yimaado nidaamka cusub ee hawlgalka laga yaabo in la iska indhatiro ama xitaa la iloobo. Markan waxaan arki doonnaa sida ay u fududahay in lagu daro dhacdo maalin dhan ah jadwalka taariikhda macOS Sierra, OS El Capitan iyo waxaan u maleynayaa sidoo kale OS X Yosemite iyo OS X Mavericks kan dambe si loo arko haddii isticmaale kasta uu xaqiijinayo laakiin waxaan u maleynayaa inaan xasuusto inuu isagu ahaa kii ugu horreeyay ee qaabkan ku dhex dara.
Marka la soo koobo, waxa aan ku raadineyno tan waa inaan ka dhigno xoogaa nasteexo talooyinka aan hayno iyo sidoo kale u adeegsanno nidaamka cusub ee Apple ee ka hawlgala Runtu waxay tahay in xaaladdan oo kale aysan ahayn wax cusub, laakiin haddii aan u aragno inay xiiso u tahay dhig ballan maalin dhan ah kaalandarkaaga Mac. Hawshani waa mid aad u fudud in la fuliyo waxayna si fudud ugu baahan tahay abuuritaanka "dhacdo deg deg ah" jadwalka, oo aan qabanno leh badhanka "+" taas oo ka muuqata bidixda kore ee daaqadda kalandarka.
Marka la furo, waxa inala gudboon waa inaan ku darno taariikhda hawsha na saaran ka dibna hawsha lafteeda, tusaale ahaan: Sebtember 23 gaariga ka soo qaado aqoon isweydaarsiga. Xaaladdan oo kale, hawsha ayaa loo keydinayaa sidii dhacdo maalin dhan kalandarka ah oo haddii aan u baahanahay inaan abuurno dhacdo dhowr maalmood waxa aan sameyno waa inaan ku darno bilowga iyo dhammaadka taariikhda, tusaale ahaan: laga bilaabo Ogast 1 ilaa 15 Ciidaha. Sidan ayaa dhacdada loogu abuuri doonaa maalmaha buuxa inta lagu jiro taariikhaha aan qornay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loogu daro "hawl maalmeedka oo dhan" kalandarka macOS Sierra